मलेसियाको ६० हजारको जागीर छोडेर बाख्रा पालनमा - Naya Online
मलेसियाको ६० हजारको जागीर छोडेर बाख्रा पालनमा
बिहिबार, माघ २१, २०७२ (February 4th, 2016 at 4:24pm ) समाचार
क्वालालम्पुर, पाँचवर्ष अघि रोजगारीका लागि मलेसिया आउनु भएका सिन्धुपाल्चोकका हिरालाल तामाङले मलेसियाको ६० हजारको जागीर छोडेर गाउँमै बाख्रा पालन गर्दै आफुलाइ आत्मनिर्भर बनाउनु थाल्नु भएको छ ।
धेरैले भन्छन्– बिदेशीएका युवाले आफ्नै घर, खेतमा काम गर्दैनन् वा गर्न चाहदैन्न् । उनीहरू एकतर्फी लगातार साहुको काम गर्यो । आफ्नो तलब लियो त्यसरी नै आफूलाई सजिलो र सुखी बन्ने बानीमा परेका छ । तर हिरालाल तामाङ भने मलेसियाको छँदाखाँदाको जागीर छाडेर घरपरिवारसँगै बाख्रा पालन गर्दै आफुलाई सफल कृषक बनाउन मिहेनतरत हुनुहुन्छ ।
उहाँले मलेसियामा कमाएको कमाईलाई घर खर्चमा मात्र सिमीत गर्नु भएन । घरको गर्जो टार्दैै थोरैथारै गरेर जम्मा गरेको कमाई नै अहिले उहाँको व्यावसाय लगानी बनेको छ । उहाँले सिन्धुपाल्चोक ठुलो सिरुबारी भन्ने ठाउँमा करिब १२ रोपनी जग्गामा बाख्रालाई आवश्यक पर्ने डाले घाँस लगाउनु भएको छ भने बाख्रा पालनको लागि करिब ५ लाखभन्दा बढी रकम लगानी गर्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो– “अहिले सुरुवात हो त्यसैले २० वटा बाख्राबाट सुरु गरेको छु ।” राम्रो गर्न सकियो भने यसलाइ बढाएर बार्षिक २०० वटा खसिबोका उत्पादन गर्ने उद्देश्य छ । अहिले सुरुवातमा सबै पाठापाठी उत्पादनका लागि २० वटा माउ बाख्रा र एउटा बेड बोकोबाट पाल्न सुरु गरेको तामाङले बताउनु भयो ।
तामाङ अहिले आफ्नै घरपरिवारसँग बसेर आफ्नै बारिमा आधुनिक डाले घाँस लगाएर आफ्नो सुनसान घरलाई गुन्जयमान बनाउदै उराठलाग्दो बाँजो बारी र नाङ्गो पाखाहरूलाई हराभरा बनाउनु भएको छ । किन हिरालाललाई एक्कासी यस्तो सोच आयो त ? घरदेशदेखि परदेश अनि परदेश देखि घरदेशसम्मका उहाँको यात्रा अनुभव समेटिएको कथा उहाँकै शब्दमा–
म आफ्नो कक्षा १२ को पढाइ सकेर घरमा सानातिना घरायसी कामहरू गर्ने गर्थे । मलाइ पहिलेदेखि विदेश जानका लागि त्यति इच्छा थिएन । त्यसैले नेपालमा धेरै ठाउँमा जागिरको खोजी गर्दै हिड्न थाले । धेरै ठाउँमा धाएँ तर भनेको जस्तो र चाहेजस्तो जागीर पाइएन । पाए पनि जिविका धान्न पनि गाह्रो हुनेमात्र पाइए । दिन प्रतिदिन घरमा खर्च बड्दो थियो । धान्न निकै गाह्रो हुन थालेपछि म ऋण खोजेर आजभन्दा पाँच वर्ष पहिले काठमाडौको एक मेनपावर लाई ९५ हजार रूपैयाँ तिरेर मलेसियाको लागि उडेँ ।
मलेसियामा पनि कम्पनी राम्रै पाइयो । काम पनि ठिकै थियो । अनि कमाई पनि चित्तबुझ्दो नै थियो । तर जे जति सुविधा भए पनि मन भने रमाएको थिएन । कारण आफ्नो रोजाइ विदेश थिएन, बाध्यताले मलाई विदेश धकलेको थियो । मलाई आफ्नो परिवारसँगै बसेर केही काम गर्ने र आइपर्ने सुखदुःख आपसमा साट्दा संसारको सबैभन्दा धेरै सुख, खुसी र आनन्द पाएजस्तो लाग्थ्यो । तर के गर्ने थोरै आफ्नो कारणले र धेरै देशको बिग्रदो राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा बिदेशीनु परेको थियो । हामी अलिकति पढेलेखेकाहरू खेतबारीमा वा कृषि पेशा गर्न लाज मान्छौँ । अनि सबै काम र काम गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिन्छ कि भनेर आशामा बाटो हेरेर बस्छौ ।
समय र परिस्थिति बदलिँदो हुन्छ । मानिसलाइ आवश्यक पर्ने सरसामानको माग र भाउ बढ्दो हँुदा त्यस्को परिपुर्ति गर्न सकिदैन ।
मलेसियामा काम र दाम ठिकै थियो । बिदेशमा काम गरेर सुख खोज्ने उपायको खोजिमा म सिन्धुपाल्चोकदेखि क्वालालम्पुर आइपुगेको थिएँ । मनले चाहेको र अहिले तत्कालका लागि खर्च टार्ने उपायहरू पनि पाएँ । तर मेरो मन हरबखत बेचैन नै भइरहन्थ्यो । मलाई अहिलेको भन्दा भोलीको वा भविष्यको चिन्ताले प्रायः सधैजस्तो सताउने गथ्र्यो । मलेसियाबाट नेपाल फर्केर के गर्ने ? कि फरि झोला कसेर अर्कै देश जानू पर्ने हो ? यि प्रश्नहरूले मलाई सँधैजसो नै सोच्न बाध्य गराउथ्यो । र, म आफैले स्वः निर्णय गरेँ कि म अब नेपाल फर्केर आफ्नै गाउँमा मेरो भबिष्यको सम्भावनाको खोजी गर्छु ।
यहाँजस्तो दैनिक खट्ने हो भने त नेपालमा त चरीको दुध उब्जिन्छ । यहाँ कति खट्नुपर्छ ? साच्चै भन्ने हो भने असार साउनका रोपाइँमा खटिएका गोरूको जीवन मैले बिताउदै थिए । र, बिदेशीका प्रायः नेपालीहरूको मेरै जस्तै खटाइ छ होला ।
बिहान अध्यारैमा हतार हतार उठेर आँखा मिच्दै कम्पनी जाउ, अनि बेलुका आँखा चिम्लिदै राति हँुदी होस्टलमा आउ, खाना बनाउदा, नुवाइ धुवाइ गर्दा रातको १२ बजेतिर खाना खायो, सुत्ने समय त राती १ बजे नै हो । दैनिक यस्तै कामले म वाक्क हुन्थे ।
अनि म कैले कहि सोच्थेँ किन यति धेरै दुख, यति धेरै चुनौतीको भागिदार हुनु पर्छ हामी नेपाली ? कम्पनीले चाहे जति काम सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्दा पनि धन्यवादको पात्र हुन सकिदैन, किन होला ? पक्कै पनि दासत्वाको पराकाष्ठा हुनु पर्छ । हामीप्रति रोजगारदाताको हेपाहा प्रवृत्ति बढेको छ ।
हामी प्राकृतिक सम्पदाले धनी देशका नागरिक । हामी हाम्रा सबै सम्पती छोडेर सम्पत्ति कमाउनकै लागि बिदेश आएका हुन्छौ । आफैलाइ बेचेर, केही बाध्यताले बिदेशीका हुन्छौ । तर पोल्टाको बहुमुल्य बस्तु पोखिएको थाहा पाएनौ । आफ्नै स्वामित्वमा भएको खोला, नाला, वनजंगल जमिनजस्ता असीमित सम्पत्तिका स्रोतलाई सहि सदुपयोग गर्न छाडेर, हामी केही सिमित पैसा कमाउन भौतारिएका हुन्छौ ।
आज बिदेशी नागरिक नेपालमै गएर विभिन्न पेशा गरेर लाखौ रूपैया कमाई रहेको हामी देख्न सक्छौ । तर पनि हामी भने सम्पत्ति कमाउनैको लागि बिदेशमा आफ्नो अमुल्य समय, पसिना र जीवनदान दिइरहेका छौ । अनि मलाई लाग्ने गर्छ ! कि विदेशमा गरेको यति धेरै त्याग र तपस्याले नेपालमा पक्कै केही गर्न सकिन्छ ।
म सन् २०११ देखि मलेसियामा गठन भएको नेपाली युवाहरूको साझ संगठन मेचीमहाकाली युवा समूह भन्ने संगठनमा आवद्ध भए । समुहले बिदेशमा भइपरी आउने समस्याको समाधान खोज्नको साथै युवाहरूले बिदेशमा कमाएको पैसालाई नेपालमै लगानी गर्नुपर्छ र आफै स्वारोजगार बन्नुपर्छ भन्ने सोचलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो ।
हामीले कमाएको पैसा विभिन्न महँगा लुगा, कपडा र विलासी सामाग्रीमा खर्च गर्नु हुदैन । आफ्नो दैनिक हुने फजुल खर्चलाई कटौती गरेर हामीले बिदेशबाट फर्केर गाउँमै केही व्यापार, व्यावसाय सुरु गर्नुपर्छ । यसो गर्दा हामी फेरि घर खर्च टार्नको लागि अर्को देश जानू पर्दैन । त्यसो गर्नको लागि हामीले अहिलैदेखि के सोच बनाउनु पर्छ र त्यस्को लागि कति पैसा लाग्छ ? लाग्ने पैसालाई आजैदेखि बचत गर्ने बानी गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता जागरणमुलक कार्यक्रमहरू बेलाबेलामा समुहले आयोजना गर्ने गर्दथ्यो । समुहका
त्यसता कार्यक्रममा म पनि सहभागी हुने गर्थे ।
मेचीमहाकाली युवा समुहमा आबद्ध भएपछि मलाई पनि केही आत्मबल बढ्यो । आफ्नो बाँझो रहेको जग्गामा बाख्राको लागि डाले घाँस लगाउने, यहाँ कमाएको केही कमाईले बाख्रा किनेर पाल्ने सोँचका साथ म गाउँ फर्किएँ ।
म घर फर्किएको केही समयमै भुकम्प आयो । घर लडायो । हामी सबै जना कामका लागि बाहिर भएकोले हामीलाई केही भएन तर घर पुर्णरूपले भत्कियो । घर भत्किए पनि मैले विदेशमा गरेको दुख सम्झिएँ अनि त्यहाँ बनाएको सोँचलाई भत्कन दिनु हुन्न भन्ने अठोट फेरि गरेँ । मलाइ त्यो बेला निकै गाह्रो भयो भएको थियो । त्यतिबेला दोधारमा परे । अब घर बनाउने कि बाख्रा पाल्ने ? अलि कति पैसा त छ । तर मैले घर बनाइनँ आफू त्रिपालमा बसेर भुकम्पले लडाएको घरको काठपातलाई प्रयोग गरेर एउटा खोरको निर्माण गरे अनि त्यो बेला २० वटा माउ बाख्रीबाट सुरु गरेको अहिले ५० वटा भएको छ । सुरुमा घासको समस्या थियो तर अहिले आफ्नै जग्गामा लगाएको घाँस प्रयोगमा आएको छ ।